I-Vectr ihlaziyiwe kuhlobo lwe-1.4, enye into eya kwi-Sketch | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IVectr ngumhleli wemizobo yasimahla ehlaziyiwe yohlobo lwe-1.4
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Izixhobo zoYilo
Kule mihla idlulileyo besinayo uthotho imbonakalo enomdla kakhulu xa kuziwa kwiiapps kunye neenkqubo ezijolise kuyilo. Sketch ihlaziyiwe kwinguqulelo 4.1, Ifoto yokuBambisana ngoku iyafumaneka kwiWindows, I-Adobe Comp CC yezixhobo eziphathwayo okanye ngokuchanekileyo, loo nto isixhobo esitsha sokuzoba iAdobe 3D oko kusisa kwezinye iindlela kunye neemvakalelo.
Uninzi lwazo lwaziwa ngumntu wonke, kodwa kukho enye ehlaziyiweyo namhlanje, ekufuneka uyithathele ingqalelo, iVectr 1.4. Lolu hlelo lokusebenza luye lwaveliswa ngu Iqela le-indie ukusukela ngo-2001 ngaphandle kwezixhobo ezininzi, kodwa ngeenjongo ezininzi, kwaye kwinguqulelo 1.4 izisa amandla okubeka amaqela.
IVectr sisixhobo enye indlela eya kuloo Sketch kunye ne-Inskcape enokuchazwa ngokulula kwayo kwaye iyafumaneka simahla kwiWindows, Mac, Linux nakwiChannel.
Ukusuka kwiBhlog yakhe, uVectr, uthathe ixesha lakhe kwiiyure ezili-13 ezidlulileyo ukubhengeza ukufika kwale nguqulo intsha izisa ifayile ye- ukukwazi ukubeka amaqela. Ngoku uya kuba nakho ukwenza ngobuqhetseba kwizinto ngokwamaqela, usenza ukuba ukuhamba komsebenzi kuyile lula kwaye kube lula ngakumbi kunangaphambili. Liqela ngokwalo elilungiselele isifundo sevidiyo esichaza kakuhle ukuba isebenza njani le nto intsha, ikwazileyo ukubhengezwa njengenguqulo 1.4.
Oku kusebenza ngendlela ekufuneka uyenzile khetha iileya ofuna ukuzidibanisa Ngeqhosha le-Ctrl kwiWindows okanye nge-Command kwi-Mac, ukuze uzikhethe kwimenyu yomaleko. Ngenye indlela, izinto zendawo yokusebenza zinokuchongwa ngokukhethwa koxande okuqhelekileyo kwezinye ii -apps.
Inoveli enomdla yenkqubo onokuyenza khuphela simahla kwiwebhusayithi yabo. Unekhonkco ngokwakho ukusuka apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » IVectr ngumhleli wemizobo yasimahla ehlaziyiwe yohlobo lwe-1.4
UHasui Kawase, oyena mlingisi unetalente waseJapan wentshukumo yobugcisa "yeShin-Hanga"
Incwadi yemizobo yejoni elineminyaka engama-21 ubudala kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi